top 3 Best Wadooyinka Tareenka Waayo Winter In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > top 3 Best Wadooyinka Tareenka Waayo Winter In Europe
Badan ka sahlan baabuur oo dheeraad ah oo raaxo badan bas, qaadashada tareenka waa mid ka mid ah hababka ugu fiican in ay la kulmaan ah Wadooyinka Tareenka ugu wanaagsan ee barafka Winter in Europe. dib u fadhiiso, nasato iyo bogi cajiib ah buuraha, webiyaasha, iyo harooyinka halka en wadada si badan waayo-aragnimada jiilaalka Europe leeyahay in ay bixiyaan tareen.
Nalalka WAQOOYIGA waxaa ugu yaqaan ee waddooyinka tareenka ee barafka ee xilliga qaboobaha
jiilaalka kasta, cirka sare waqooyiga Yurub shimmer leh midabada psychedelic of Borealis aurora ah (Lights Northern). In ay la kulmaan midabada la rumaysan karin in guurto guud ahaan samada Arctic waa liiska baaldi dad badan '. meelo yar oo dhulka ku bixiyaan siyaabo ka marag ah Borealis aurora badan Norway. Tani waxay hubaal waa Wadooyinka Tareenka ugu wanaagsan ee barafka Winter in Europe, la gunno dheeraad ah-dheeraad ah Lights Northern ah. From Stockholm, tareenada habeenkii waxa aad qaadan doonta jidka oo dhan kuwaas farxaan dabiiciga ah.
Rovaniemi waxaa loo yaqaan guriga of Santa Claus. Waa meel sixir Christmas waxay noqon kartaa sannadka oo khibrad leh. Tegi doonaa meelaha sida Santa Claus Village iyo SantaPark. Rovaniemi waa caasimadda ah ee Lappland. Waxay hoy u tahay Lappland ee Gobolka Museum Arktikum, kaynta Kaapelitalo Pilke Science Center iyo Korundi Golaha Dhaqanka.
The 9-saac safarka tareenka ka Helsinki waa sidoo qiimihiisu isagoo liiska Wadooyinka Tareenka ugu wanaagsan ee barafka Winter in Europe.
Barafka ON MIISAANIYADDA A, Bulgaria oo ku guuleystay ee jidadka tareenka ugu jaban qaboobaha
Sida aynu ku siin karaan liiska Wadooyinka Tareenka ugu wanaagsan ee barafka Winter ee Europe oo aan idin siinayo meel ay tagaan skiing? Waxaan u maleeyay in aan ku siin lahaa tip dheeraad ah oo siinaya noo talin skiing on miisaaniyad, sidoo kale!
Jartaan tikidhka tareenka in si Bulgaria! kaalinta qaboobaha ayaa ahaa sirta ugu fiican reer yurub muddo. Waxaa si degdeg ah noqoto meel coolest qaboobaha Yurub ciyaaraha hadda, in kastoo.
Waxaan ku talinaynaa Bansko. sida dookh fiican u yahay meelo si loo soo afjaro jidadka tareenka aad qaboobaha. A magaalada Alpine quaint in ay mudantahay booqashada. Sidaas darteed, safarka tareenka halkaas ka Plovdiv waa waayo-aragnimo ah oo ku saabsan u gaar ah. score!
safarka tareenka Winter noqon kartaa waayo aragnimo sixir ah in aad garaac doonaa ka dalcadaha Buur baraf-ku raran yihiin in ekayd sida tuulooyinka. Ha ka maqnaan kuma soo baxo on kuwaas oo yaabab jiilaalka cajiib ah. Iyada oo ZERO Kharashka jaale Save A tareenka ma jirto wax cudurdaar ah iyaga oo dhan la ogaado!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama waxaad halkan u awooddo: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-routes-winter-snow%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Nalalka Waqooyiga #ROVANIEMI #Baraf baraf Bansko Finland longtrainjourneys barafka talooyin tareenka tareen safarka safarka Winter